RASMI: Hakim Ziyech oo heshiis shan sano ah u saxiixay Kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 24 Feb 2020. Hakim Ziyech ayaa shan sano oo heshiis ah u saxiixay kooxda kubada cagta ee Chelsea, kaddib markii dhawaan uun la shaaciyey inuu ku biiray.
Ciyaaryahankan caalamiga ah ee qaranka Morocco ayaa ku sii sugnaan doona kooxda Ajax inta ka dhiman xilli ciyaaredkan, suuqa xagaaga ayuuna si toos ah u iman doona garoonka dhaca galbeedka magaalada London ee Stamford Bridge.
Heshiiskan ayey Ajax xaqiijisay bilowgii bishan Febraayo, iyadoo 26 sano jirkaan uu yahay xiddig ay haatan milkiiyadiisa leedahay Blues.
Kaddib markii uu saxiixay heshiiska shanta sano, Ziyech ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay kuna faanayaa in aan heshiis u saxiixay Chelsea, waxaan eegayaa hore u socod xilli ciyaareedka soo aaddan, waxaan rajeynayaa in aan gaari doono si wadajir ah guulo.”
Agaasimaha ciyaaraha ee Chelsea, Marina Granovskaia ayaa isaguna yiri: “Waxaan ku faraxsannahay Hakim uu innagu soo biiri doono suuqa xagaaga, wuxuu ka mid ahaa furayaasha bartilmaameedyadeenna suuqii kala iibsiga ee ugu dambeeyay.”
“Sanadihii ugu dambeeyay waxa uu si joogta ah u ahaa mid ka mid ah weeraryahannada ugu qatarta badan ee qaaradda Yurub, sida aan ku aragnay labadii kulan ee Champions League aan la ciyaarnay Ajax.”